विपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रौनियार ८ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ || सुनौलो नेपाल
विपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रौनियार ८ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ
सुनौलो नेपाल – धरानस्थिन बीपी कोइरला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर राजकुमार रौनियार घूससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई विहिवार साँझ उनकै सरकारी निवासबाट पक्राउ गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार उनलाई ८ लाख घूस सहित रंगेहात पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभयो । अस्पतालको परिसरभित्रै रहेको निजी निवासबाट घुसको रकमसहित रौनियार प्रक्राउ परेका हुन् । भवन निर्माणसम्वन्धि ठेक्कामा कमिसन माग गरेको उजुरी आयोगमा परेपछि उनिमाथी अख्तियारले निगरानी राखेको थियो ।
उपकुलपति रौनियारसहित अर्का डा. रामहरी रौनियारपनि पक्राउ परेका छन् । डा. रामहरी धरानमै एमबीबीएस सकेर एमडी अध्ययनरत रेसिडेन्ट डाक्टर रहेको बताइएको छ । उनी रौनियारका नातेदार समेत रहेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।
उपकुलपति रौनियार राजनीतिक हिसाबमा नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । उनलाई गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुदा उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । उनिविरुद्ध कयौं उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । प्रतिष्ठानमा लामोसमयदेखी वेथिति र भ्रष्टचारको दलदलमा फसेको प्रष्ठिानका विषयमा दर्जनौं उजुरी अख्तियारमा परेका थिए ।
बिहि, असार २६, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस
पर्यटनमन्त्री माथि नेपालगंज विमानस्थलमा भएको घटनाको सन्दर्भमा बल्ल बोल्यो मन्त्रीको सचिबालय !
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईमाथि जहाजमै दुर्व्यवहार गर्नेलाई के हुन्छ कारबाही, यस्तो छ कानुनी ब्यबस्था !
नारायणी नदीमा दशैँअघि पानीजहाज !
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले शनिबार साँझ नेपालगञ्जबाट काठमाडौं उड्ने क्रममा भएको दुर्ब्यबहार...
भदौ २९ काठमाडौं सार्वजनिक स्थानमा कोही कसैमाथि दुर्व्यवहार हुनु फौजदारी अपराध...
भदौ २९ काठमाडौं पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतसँग युद्ध हुन सक्ने...
भदौ २९ काठमाडौं सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित...
घरबेटीलाई भाडावालसँगबाट बिजुलीको धेरै शुल्क नलिन कुलमानको चेतावनी
भदौ २९ काठमाडौं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले घरबेटीले...
रुपन्देहीमा गोलि चल्यो !
रुपन्देही : रुपन्देहीमा लुटेरा समूहले गोली हानेर एकजनाको हत्या गरेका छन्।...